Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka tacsiyeeyay dilka guddoomiye ku xigeenkii Amniga Shabeellada Dhexe oo xalay la dilay. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka tacsiyeeyay dilka guddoomiye ku xigeenkii Amniga Shabeellada Dhexe...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka tacsiyeeyay dilka guddoomiye ku xigeenkii Amniga Shabeellada Dhexe oo xalay la dilay.
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu yiri:- Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle, Dr Maxamed Cabdi Waare, oo ku hadlaya Afka Golayaasha Dowladda iyo kan Shacbiga Hirshabelle ayaa ka tacsiyeeyay Geerida Allaha u naxariistee Guddoomiye ku xigeenkii amniga Gobolka Sh.Dhexe marxuum Muxumad Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay oo Caawa ugu geeriyooday Jowhar Bam gacmeed kooxaha Nabad diidka ay ku weerareen Gurigiisa.
Madaxweyne Waare ayaa tilmaamay In Marxuumka uu ahaa xubin muhiim ah oo ka baxday Dawladda iyo shacabka Hirshabelle islamarkaana uu hayay shaqo adag oo muhiim u ah nidaamka Dawliga ah, iyo Xaqiijinta Amniga.
Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa faray hey’adaha Ammaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan baaritaan dhab ah oo la xiriira weerarkaasi fulaynimada ah ee lagu dilay marxuum Muxumed Sugaal sharcigana la soo taago dhagar qabayaashii ka dambeeyay.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlay ayaa guud ahaan Shacbiga Hirshabelle kula dar daarmay in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah meelna uga soo wada jeestaan cadowga Umadda Soomaaliyeed ee argagaxisada Al Shabaab islamarkaana ay la shaqeeyaan Hey’adaha ammaanka sidoo kalena ay iska hubiyaan cid kasta oo ku soo dhex dhuumaneysa.
Previous articleWax badan ka ogow maalinta calanka Soomaaliya 12-ka October.
Next articleDhacdadii 14kii Oktoobar oo Laba Gu’ Jirsatay.